Ny sain'ny B | Super introvert amin'ny tontolo extrovert
Mankanesa ao amin'ny Content
Azafady ny vovokay! Ny bilaogy MoB dia manavao fanavaozana hafa rehefa mizaha!
Inona ny atao hoe Super Introvert?
Mpitovo & mampiaraka
Fahasalamana sy fikarakarana tena
Ara-tsaina sy ara-pientanam-po
Fahasalamana sy aretina
Fikolokoloana volo olioly
Ny sain'ny B
Miaina sy be fitiavana amin'ny maha-introvert sy empathialy mora tohina an'izao tontolo izao
Mitady zavatra ve? Mikaroha na inona na inona ary ampidiro.
Fiainana tsotra Manambady sy mampiaraka
Mid-30, Vehivavy, mpitovo ary mahatalanjona
Ny zavatra farany nokasaiko hatao dia ny hamerenana ny bilaogiko amin'ny famoahana bilaogy hafa. Saingy rehefa hitako ny lohatenin'ny lahatsoratra Vogue.com nozaraina tao amin'ny Twitter herinandro vitsivitsy lasa izay dia may tokoa ny bisiko. “Ahoana no nahatongavako ho olona mpitovo farany tao amin'ny vondrona nisy ahy?” Aka, “Mid-30 sy mpitovo: Efa niandry ela be ve aho…
Fahasalamana ara-tsaina sy ara-pientanam-po Super Introvert
Andro mangatsiaka sy ny fomba hiatrehana azy ireo
Tsy lazaina intsony fa. Halako ny andro. Andro inona izao? Ny andro fialantsasatra dia ireo fotoana izay hidiranao ao an-dohanao zavatra tsy misy dikany sy hadalana. Angamba ianao nanadino zavatra tao amin'ny fivarotana enta-madinika, ary izao dia tara amin'ny fety ianao. Na mety tsy niantso anao ny namanao iray rehefa nahatsapa fa mila ny azy ireo…
Ilay zavatra lehibe indrindra mandrakizay
Ny zavatra lehibe indrindra EVERA # 1: GreenBeauty
Tamin'ny taon-dasa, tao am-pon'ny quarantine an'ny COVID-19, dia niroborobo bebe kokoa noho ny hatramin'izay ny loharano an-tserasera momba ny fikolokoloana volo voajanahary. Ny teo an-trano dia azo antoka fa nanome ahy fotoana fanampiny hanaovana izany, ary fantatro fa tsy izaho irery. Ry namana, fianakaviana, mpiara-miasa, forum an-tserasera - saika ny mpanam-bolo rehetra fantatro dia nanapa-kevitra ny hamela ny hidin'izy ireo hitombo kely…
Nonfiksi & fanesoana
Mamerina ny bilaogy (aka Tratry ny taona!)
Miarahaba antsika rehetra, ary faly, tratry ny taona vaovao! Heveriko fa afaka manaiky daholo isika fa tsy diso fanantenana manokana isika mahita ny faran'ny 2020. Fa iza no mahalala – angamba ny sasany amintsika dia. Fantatro fa maniry mafy ny hametraka ny 365 andro farany any aoriana indrindra isika rehetra, fa mba hahazoana antoka fa tadidintsika ny antony feno fankasitrahana antsika amin'ny fivoaran'ny taona vaovao,…
Ny sain'ny B amin'ny fahazoana asa sasantsasany – Averina indray
Hataoko haingana sy maloto ity. Amin'ny maha-mpiara-miasa antsika rehetra dia nandalo heck iray taona teo ho eo isika tamin'ny taona 2020. Isaky ny hitako manokana ny zavatra iainanao rehetra – sy ny fahatsapanao, ambonin'ireo zava-nitranga rehetra. Raha ny tenako dia tsy fahita firy amin'ireo morontsiraka ara-tsaina, ara-pihetseham-po ary ara-batana ho an'ny maro be…
Fahasalamana ara-tsaina sy ara-pientanam-po Nonfiksi & fanesoana
Maniry aho fa hitsahatra ireo biby goavam-be
Tamin'ny alina faharoa nisesy dia nitranga izany. Tamin'ity indray mitoraka ity, nijoro tao an-dakozako aho nanadihady ny tranoko Google momba ny halavan'ny fotoana nahafahako namoaka hena manta tamin'ny hafanan'ny efitrano alohan'ny nanombohan'ny bakteria. Tamin'ny fotoana namakivakiana ilay fampandrenesana ampahibemaso ampahibemaso tamin'ny efijery mihidy amin'ny findaiko finday rehefa nipetraka tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, izaho…
Akora voajanahary Ny ankahalain'ny voloko (mety ho anao koa)
Okay, okay – noho izany tsy ity no bilaogy mampihetsi-po indrindra na mavitrika indrindra miverina amin'ny laoniny. Na izany aza, tena misy ifandraisany amiko izao. Mandritra io fotoana io, rehefa mijanona ao an-trano dia manampy ny tenako sy ny olon-kafa rehetra, dia manana fotoana be dia be aho handinihana ny fomba fiainako. Ny namako sy ny fianakaviako dia…
Fahasalamana ara-tsaina sy ara-pientanam-po Fiainana tsotra
Tratry ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy !!!
Te-hieritreritra aho fa ny ora fitsangatsanganana an-tsokosoko dia mazoto sahala amin'ny ambiny sisa hanombohana ity andro mahafinaritra ity - ity andro ity (na dia tokony hankalazantsika azy isan'andro aza izany) dia mankalaza ara-dalàna ny vehivavy na aiza na aiza isika. Amin'ny maha-vehivavy ahy dia sahirana foana amin'ny mombamomba ahy aho - izany hoe, ahoana no ahafahako ho vehivavy tsara indrindra afaka ho tonga? Manandrana ve aho…
Manambady sy mampiaraka
Ireo fomba fiarahanay mampiaraka
Ahoana ny fitiavako anao? Avelao aho hanisa ny lalana. Elizabeth Barrett Browning Tokony ho tsapako taloha fa zavatra adala ihany no mitranga amin'ny 11 alina amin'ny alina. Ho ahy dia nanandrana namorona farafara fandriana am-baravarana teo am-baravarana aho, teo am-piandrasana ny iray amin'ireo namako ho avy avy niasa ary nanampy ahy…
Self-care Fiainana tsotra
2020: Taonan'ny famahana sy fanovana
Tsindrio eto raha hijery mahitsy ireo "famahana" Taom-baovao 2020! Fanambarana mahaliana ny mahatsapa tsara amin'ny maha-olon-dehibe anao fa tsy miova ianao, hendry amin'ny toetranao, hatramin'ny fahazazanao. Raha madio toy ny zaza ianao, manary ny kilalaonao rehefa avy nilalao, dia mety mbola mahita fifaliana mahafinaritra ianao amin'ny fitazonana izany fahadiovana ao amin'ny…
Tongasoa eto amin'ny Mind of B
Brandee no anarako. Mpanoratra aho, proofreader tsy miankina, ary mpilalao feo maniry. Izaho koa dia olona tena saro-pady, miombom-pihetseham-po ary introvert amin'ny karazana avo indrindra.
Ity bilaogy ity dia mitantara ny fifaliako sy ny tolona ataoko amin'ny fitadiavana fifandanjana eo amin'ny fiainana amin'ny maha-vehivavy afrikana-amerikana tokana manana fitiavana amin'ny famoronana, ny fahasalamana ara-tsaina, ary ny fikarakarana volo voajanahary, ary mijanona ho mahatoky amin'ny "super introversion" ahy.
Ayurveda sy ny voloko
Enga anie 20, 2012
FictionNonfiksi & fanesoanaAmin'ny fanoratana
5 (Tsara) Classical Classics Latsaky ny pejy 200
Nonfiksi & fanesoanaAmin'ny fanoratanaSuper Introvert
Ny lafiny ratsy amin'ny maha-mpiambina olona
Fiainana tsotraManambady sy mampiaraka
Aogositra 19, 2017
Ahoana ny fomba hiarovanao tena tsy ho adala noho ny fanorotoroana
Aogositra 2, 2016
Fahatsiarovana maharitra (Archives)
Fahatsiarovana maharitra (Archives) Select Month Janoary 2021 (2) Jona 2020 (2) Mey 2020 (1) Martsa 2020 (2) Janoary 2020 (1) Novambra 2019 (2) Oktobra 2019 (4) Septambra 2019 (5) Jolay 2019 (2) Jona 2019 (2) Mey 2019 (3) Janoary 2019 (4) Desambra 2018 (3) Novambra 2018 (3) Oktobra 2018 (2) Septambra 2018 (5) Aogositra 2018 (4) Jolay 2018 (3) Jona 2018 (2) Mey 2018 (3) Aogositra 2017 (2) Aogositra 2016 (1) Jolay 2016 (1) Mey 2016 (1) Aprily 2016 (1) Septambra 2015 (3) Martsa 2015 (2) Aogositra 2014 (1) Jona 2014 (1) Aprily 2014 (2) Martsa 2014 (1) Janoary 2014 (1) Novambra 2013 (2) Oktobra 2013 (7) Febroary 2013 (1) Janoary 2013 (1) Oktobra 2012 (1) Septambra 2012 (7) Aogositra 2012 (6) Jolay 2012 (1) Jona 2012 (1) Mey 2012 (3) Aprily 2012 (1) Martsa 2012 (2) Febroary 2012 (6) Desambra 2011 (1)
Archive "amin'ny fanoratana"
Mitady ireo bitsika taloha sy lahatsoratra mifandraika amin'ny boky? Kitiho ny sary.
matahotra ho sambatra (4) matahotra manoratra (5) vehivavy mpitovo mahatalanjona (3) régime volo ayurveda ho an'ny vao manomboka (4) lasa mpanoratra (6) olona tsara kokoa (7) faly (10) fikolokoloana volo olioly (6) fiatrehana fihetsem-po (9) fiatrehana fankahalana (4) Tia ahy ve ny olona? (3) Andro farany (3) fanoratana maimaim-poana (7) volo 4c (8) toro-hevitra momba ny fitomboan'ny volo ho an'ny volo voajanahary (4) introvert tena saro-pady (5) ahoana no hahasambatra ahy (5) ahoana no hahazoako torimaso bebe kokoa (3) Tiako ny voloko (5) Tiako ny manoratra (13) aingam-panahy hanoratra (3) dia manoratra mafy (4) Te ho sambatra aho (3) very fitiavana (3) fitsapana amin'ny fiteny fitiavana (3) tia ny bilaogy (7) sain'ny b (19) fitiavana tsy hita (3) volo voajanahary (10) vokatra volo voajanahary (3) filaminan-tsaina (5) fahanginana (14) vehivavy mainty tokan-tena (3) fiara Alahady (4) Super introvert (9) ilay nandositra (3) manandrana manamboatra ny zava-drehetra (4) hitombo volo lava ve aho (3) sakan'ny mpanoratra (6) fanasitranana ny sakana an'ny mpanoratra (4) fanampiana ny fanakanan'ny mpanoratra (3) fanarenana ny block an'ny mpanoratra (3) soratra (7) manoratra ho ahy (9) fanoratana haingana (8)
Misoratra anarana amin'ny The Mind!
Makà lahatsoratra vaovao ao anaty boaty mailakao amin'ny fotoana navoakany amin'ny tranokala!
Araho aho amin'ny Instagram!
© Copyright 2022 Ny sain'ny B. Zo rehetra voatokana. Blossom Pin Pro | Novelomin'i Hevitra Blossom. Powered by WordPress.